China Clear Pipe Perspex Plexiglass Acryli mpempe akwụkwọ factory na suppliers | Donghua
O doro anya na nke doro anya, nke a na-enweghị ntụpọ, nke a na-acha na-enweghị ntụpọ, nke a na-eme ka ọ dị mma ma dị mma maka ngwa ọ bụla. Ọ bụ ihe ọzọ na-ewu ewu na iko n'ihi ịdị arọ ya na nguzogide mmetụta ka ukwuu. Dị ka acrylics niile, mpempe akwụkwọ a ga-adị mfe ịkpụ, guzobe ma mepụta ya. Donghua na-enye mpempe akwụkwọ acrylic dị iche iche dị na mpempe akwụkwọ zuru ezu, mpempe akwụkwọ a na-akpụ na nha dịgasị iche, akara ule, na ụdị.
• Odi na 48 ″ x 72 ″ / 48 ″ x 96 ″ (1220 * 1830 mm / 1220 × 2440 mm) mpempe akwụkwọ
• Ọ dị na .031 ″ ka .393 ″ (0.8 - 10 mm)
• omenala nha, ọkpụrụkpụ na agba nwekwara
• 3-mil laser-ịkpụ film nyere
• AR ọkọ na-eguzogide mkpuchi mkpuchi dị
Clear Plexiglass Acryli mpempe akwụkwọ, Piel Plastic mpempe akwụkwọ
Acrylic, nke a makwaara dị ka Plexiglass, bụ thermoplastics ma na-ebutekarị na mpempe akwụkwọ dị ka iko dị arọ ma ọ bụ na-eguzogide ọgwụ. Clear Acrylic Sheets na-egosiputa àgwà yiri iko-nke doro anya, nchapụta, na nghọta-mana ọkara ọkara na ọtụtụ oge mmetụta nke iko. Ọ dị mfe ịkpụpụta, agbụ nke ọma na nrapado na ihe mgbaze, ma dịkwa mfe na-ekpo ọkụ na-enweghị ọnwụ nke nghọta doro anya.
Donghua na-enye mpempe akwụkwọ acrylic dị iche iche dị na mpempe akwụkwọ zuru ezu, mpempe akwụkwọ a na-akpụ na nha dịgasị iche, akara ule, na ụdị.
Aha ngwaahịa Clear Plexiglass Acrylic Sheet, Pipe Plastic mpempe akwụkwọ - "PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, acryli, Plexiglas, Optix"
Aha Ogologo Polymethyl Methacrylate
Ihe onwunwe 100% Virgin PMMA
Elu rụchaa Kenkowaputa
Nha 1220 * 1830mm / 1220x2440mm (48 * 72 na / 48 * 96 na)
TỌrịa 0.8 0.8- 10 mm (0.031 na - 0.393 na)
Njupụta 1.2g / cm3
Nnyefe ọkụ 92%
Acryli .dị Egwu
Nnyefe Oge 5-10 ụbọchị mgbe iwu nkwenye
DHUA Acrylic Sheet Na-arụ Ọfụma
Anyị vasatail acryli mpempe akwụkwọ nwere ike mfe ebipụ, sawed, gbapuru, egbu maramara, ehulata, machined, thermoformed na sikwuo
Cutkpụrụ Ogologo Ogologo na obosara ogologo bụ +/- 1/8 ″, mana ọ bụ ihe ziri ezi karị. Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọ oke. Acryli sheet thickness tolerances bụ +/- 10% ma nwee ike ịdị iche na mpempe akwụkwọ niile, mana ọdịiche dịkarịsịrị karịa 5%. Biko rụtụ aka na njupụta na akwụkwọ mpempe akwụkwọ dị n'okpuru.
0.06 ″ = 1.5mm
0.08 ″ = 2mm
0.098 ″ = 2.5mm
Translucent, Piel ma ọ bụ Opaque Acha Acryli Plexiglass Avalilable
· Piel Acryli Plexiglass = E nwere ike ilele onyonyo site na mpempe akwụkwọ (dị ka iko enyo)
· Translucent Acrylic Plexiglass = Ìhè & Onyunyo nwere ike ịhụ site na mpempe akwụkwọ.
· Opaque Acrylic Plexiglass = Enweghi ike ihu ma ọ bụ onyonyo site na mpempe akwụkwọ.
Mpempe akwụkwọ acrylic dị ọtụtụ na ebumnuche nwere ọtụtụ ọrụ na-arụ ọrụ, akwụkwọ a na-akpọ acrylic nwere ọtụtụ ngwa na ọtụtụ ebe obibi, azụmaahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke ndị ọkachamara.
Glazing, nche & ọta, ihe ịrịba ama, ọkụ, foto etiti glazing, ìhè ndu panel, signage, retail ngosi, mgbasa ozi na isi nke zuo & ire ere ngosipụta, ahia show ụlọ ndò na ngosi ikpe, kabinet n'ihu na a dịgasị iche iche nke ndị ọzọ Mee N'onwe Gị oru ngo. Ndepụta na-esote bụ naanị ihe atụ.
■ Point-nke-zuo ngosipụta ■ Trade show exhibits
Map / foto mkpuchi medium Framing medium
Panels Ogwe ngwá electronic dị iche iche gla Igwe na-egbuke egbuke
■ Nche na-ekpo ọkụ ■ displaylọ ahịa ihe ngosi na ikpe
■ Broshuọ / ndị ji ihe mgbasa ozi enses Anya m
Splash nche ■ Lighting eletrik diffusers
Ihe ịrịba ama equipment Ngwa akọrọ
Models ■ Sneeze na-eche nche
Windows Ngosi windo na ụlọ ■ Ihe mkpuchi
Extruded acrylic sheet na-emepụta usoro extrusion. A na-ewepu pellets acryli acrylic na nchara a wụrụ awụ nke na-aga n'ihu na-anwụ site na ya, ọnọdụ ya na-ekpebi ọkpụrụkpụ nke mpempe akwụkwọ a rụpụtara. N'otu oge site na-anwụ, wụrụ awụ uka looses okpomọkụ na ike trimmed na bee ka chọrọ mpempe akwụkwọ nha.
acryli doro anya Ibé akwụkwọ
acrylic mpempe akwụkwọ doro anya
acrylic mpempe akwụkwọ transperent
acrylic transperent mpempe akwụkwọ
doro anya acrylic mpempe akwụkwọ
perspex mpempe akwụkwọ
plexiglass Ibé akwụkwọ
uzo acrylic mpempe akwụkwọ